Shirkii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo furmay iyo wajiyo ku cusub maanta - Caasimada Online
Home Warar Shirkii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo furmay iyo wajiyo ku cusub maanta
Shirkii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo furmay iyo wajiyo ku cusub maanta
Muqdisho (Caasimada Online) – Hotel-ka Decale ee ku yaalla gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaa ka bilowday shirkii sii hayaha ra’iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, iyadoo ay jiraan wajiyo cusub oo ka maqnaa shirkii khamiistii dhacay.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulankaan ku casuumay midowga musharaxiinta iyadoo laga wada hadli doono arrimo ku saabsan sidii ay Midowga uga qeyb gali lahaayeen shirka ku saabsan arrimaha doorashooyinka.
Shirka waxaa goob joog ah ra’iisul wasaarahii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo kulankii Khamiistii ka maqnaa, markii ugu horreysay ayey is hor fariisan doonaan isaga iyo ra’iisul wasaarahii xilka ka badalay Maxamed Xuseen Rooble.
Shirka sidoo kale waxaa jooga madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi (Guudlaawe) iyo sidoo kale madaxweynahii hore maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo kulankii hore ka maqnaa.
Sida la filayo shirkaan waxaa xigi doona in sii hayaha ra’iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble uu codsi u diri doono madaxda maamul goboleedyada si la isugu yimaado shir ay korjoogto ka noqoto beesha caalamka isla markaana dhinacyada kala duwan ka qeyb galaan.
Maxamed Xuseen Rooble wuxuu hadda u muuqdaa mid qaadanaya doorkiisii ka gudbinta marxaladda kala guurka ee wadanka.